Apple Oo Shaacisay Ku Guuleystayaasha Tartankii Ardayda Ee Swift | Wararka IPhone
Apple waxay ku dhawaaqday guuleystayaasha tartanka Swift Student
Apple waxay usbuuc un u jirtaa inuu laado mid ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan sanadka: kan WWDC 2021. Dhacdadani waxay isu keentaa kumanaan horumariyayaal ah oo mas'uul ka ah soo kicinta App Store si ay ula noolaadaan barnaamijyo badbaadinaaya nolosheena hawlo fara badan maalintii oo dhan. Apple waxay marwalba dooneysay inay abaalmarinto kan ugu yar ee guild-ka iyagoo ugu deeqaya inay ka soo qayb galaan munaasabadda bilaashka ah. Si kastaba ha noqotee, iyada oo loo marayo dhacdo muuqaal ah suurtagalnimada ka-qaybgal bilaash ah horayba way u jirtay. Si kastaba ha noqotee, guuleystayaasha Swift Student Challange ayaa la qeexay taas oo abaal marinaysa dhallinyaradan horumarineed ee ku xeeran shirkadda Apple.
Iskuxirka Ardeyda Swift: 350 Ku guuleystayaasha oo xubin ka ah Sannadle Bilaash ah
Kooxdan waxaa ka mid ah seddex gabdhood oo dhalinyaro ah oo aan kaliya u isticmaalin tiknoolajiyada xalinta dhibaatooyinka dhabta ah ee adduunka, laakiin sidoo kale waxay si firfircoon uga qayb qaataan barashada jiilka soo socda inay sidaas oo kale sameeyaan. Isla mar ahaantaana waxay gubayaan wadadooda iyagoo hubinaya in kuwa kale ay haystaan ​​qalab ay ku raacaan raadadkooda, dhammaantood ka hor inta aysan ka qalin jabin dugsiga sare.
El Iskuulka Swift Student waa tartan ay Apple xusto sanad walba kahor WWDC. Hadafku waa in la ogaado oo lagu abaalmariyo hibada hareeraha lambarka horumarinta adduunka oo idil. Ka-qaybgalayaashu waa inay ka weyn yihiin 16 sano Midowga Yurub ama ay ka weynaadaan 13 ee Mareykanka. Si ay uga qaybgalaan, waa inay u diraan macluumaad iyaga ku saabsan, la kulmaan taxane ah shuruudaha ku saabsan tababbarkooda hay'adaha la xiriira barnaamijyada 'STEM' ama hay'adaha ay caddeeyeen Apple. Soo bandhigid ka sokow mashruuc ka socda Swift Playground taas waxaa lagu tijaabin karaa wax ka yar 3 daqiiqo.
Tani waa sida Apple ay u horumarisay goleyaasha wadahadalka ee WWDC 2021
Dhowr saacadood ka hor war-saxaafadeedka ayaa la daabacay isagoo ku dhawaaqaya go'aanka xeerbeegtida Swift Student Challange. Si kastaba ha noqotee, ma jiro liis rasmi ah oo ay la socdaan ilaa 350 guuleysta oo ka socda illaa 35 dal oo kala duwan. Iyada oo ay taasi jirto, Apple waxay dooneysay inay muujiso seddex haween ah oo aan u isticmaalin kaliya tiknoolajiyada xalinta dhibaatada adduunka dhabta ah. Laakiin sidoo kale waxay si firfircoon uga qaybqaataan bulshada. Tan waxaa lagu xaqiijiyay a War-saxaafadeed:
Isla mar ahaantaana waxay gubayaan wadadooda iyagoo hubinaya in kuwa kale ay haystaan ​​qalab ay ku raacaan raadadkooda, dhammaantood ka hor inta aysan ka qalin jabin dugsiga sare.
Ku guuleystayaasha ayaa heli doona Ku biirid bilaash ah hal sano barnaamijka Apple Developer. Haddii aysan gaarin da'da sharciga, markii ay gaaraan da'da qaan-gaarka, waxay awoodi doonaan inay la xiriiraan tufaaxa weyn si ay ugu furaan abaalmarintooda. Maxaa intaa ka badan, waxay heli doonaan jaakad iyo biinano Gaar u ah WWDC 2021-kan oo bilaabmaya bisha Juun ee soo socota 7.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple waxay ku dhawaaqday guuleystayaasha tartanka Swift Student
Tani waxay noqon laheyd iPhone 13 sida ku cad daadashada faylasha CAD
Naqshadaynta cusub ee biraawsarka Firefox wuxuu ku yimaadaa macruufka iyo iPadOS